Ihe Omume Kwesịrị Ekwesị Ị Kwesịrị Ịtụle Mgbe Ị Na-achọ Ndenye Aha Aha
Mgbe ị na-eche echiche ịmepụta njikọ gị n'Ịntanet, ihe mbụ ị kwesịrịime bụ ịdebanye aha gị na ngalaba. Ịhọrọ ngalaba aha dị mkpa n'ihi na ọ ga-emema ọ bụ mee ka ị nwee ọganihu ma ọ bụ daa n'achụmnta ego gị. Aha ngalaba na-eme ka o doo anya na ịntanetịọnụnọ, na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị anya. Na-achọ aha ọma ngalaba aha,Lelee ụfọdụ ihe, na Semalt Digital Services na-eduzi ọkachamara, Julia Vashneva, na-atụ aro ka ị tụlee.
Nlekọrịta Ụlọ Ọrụ
Ịchọta ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi dị mkpa. Ọtụtụ mgbe ụlọ ọrụ ndị a na-amalite mgbasa ozi haọrụ karia, na mgbe emesiri, imekorita ya na ha na-eme ihere. N'akụkụ aka nke ọzọ,ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ elu ma ha enyeghị ọrụ ruru eru. Mee nlele nyochana ụlọ ọrụ ị ga-achọ ịrụ ọrụ ya ka ị mara eziokwu banyere ya.
Mgbe ị nọ n'usoro ịdenye aha ngalaba gị, ịhọrọ ahanwere ike ịbụ ihe ịma aka mgbe ụfọdụ. Ihe ị chọrọ ịtụle bụ na aha kwesịrịdị mfe icheta na inwe njikọ chiri anya na ọrụ gị na ebe nrụọrụ weebụ gịaghaghị ịrụ. Ọzọkwa, o kwesịkwara ịbụ aha na okwu nke dị mfe ịchọ.
Achịkwa nke ngalaba Aha
Jide n'aka na aha ngalaba ahụ ị na-ahọrọ abụghị onye nweere onwe ya dị ka nke anwere ike iwetara gị nchịkọta iwu. Ọ ga-adị mma iji hụ na ụlọ ọrụ, nke ịhọrọ maka gị na ngalaba ndebanye aha, emewo n'ụzọ doro anya kọwara onye ọrụ iwu na ngalaba ahaha na-enye. Mee nhọrọ nhoro nke ndọtị iji ya na ngalaba aha gị, dịka ọmụmaatụ,ọ nwere ike ịbụ .com .net .org na ọtụtụ ndị ọzọ, ọ dabere na ebumnuche nke ebe nrụọrụ weebụ gị.
Nhọrọ nke isiokwu dị mkpa bụ akụkụ dị mkpa a ga-atụle mgbe ị na-ahọrọaha ngalaba. Nchọpụta ọchụchọ yiri ka ihu ọma aha-aha bara ọgaranya. N'okwu a, ịKwesịrị ịnwale ma jiri isiokwu mbụ ma ọ bụ ahịrịokwu ịchọrọ ịkwalite ebe nrụọrụ weebụ gịma gbalịa ịrụ ọrụ ya gburugburu ngalaba aha.
Ndekọ Ndebanye aha Web
I kwesịkwara ịnwa ịghara ịmebanye aha gị na ụlọ ọrụ weebụ gị. Makamgbe ị na-ekpebi ị ga-eso ụzọ gị na-aga (nke a na-ahụkarị), ọ na-aghọ isi ọwụwa ịkwagangalaba gị, na nke ahụ, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị kewaa ha Source .